नक्सा प्रकाशनमा सुझाव, निर्देशन र निर्णयकाे अन्तर्य: ध्यान र निशाना कहाँ छ ? « रिपोर्टर्स नेपाल
–सूर्य थापा: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भ्रम फैलाएका कारण याे विनम्र निवेदन र ध्यानाकर्षण गराउनु जरूरी भएकाे छ, जसले केन्द्रीय कमिटीकाे पछिल्लाे बैठक (१५-१९ माघ २०७६ ) ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितकाे नक्सा प्रकाशित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकाे र पछि आएर सरकारले नक्सा प्रकाशित गरेकाे भन्ने दावीसमेत गरिरहेका छन ! पार्टीले भन्नु र सरकारले गर्नु वा नेताले सुझाव दिनु र प्रधानमन्त्रीले सुझाव ग्रहण गर्नुमा अचम्मित हुनुपर्ने त कुनै कारण हुँदैन ।
स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकपछि पार्टी एकतासँग सम्बन्धित विषय १५ दिनभित्र टुङ्याउने भन्ने निर्णय नै भएकाे थियाे । अाज आठ महिना बितिसक्दा समेत ती १५ दिन किन आउन सकेनन् ?
तथ्यकाे आफूखुशी अपव्याख्या र भ्रष्टीकरण किन ? (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले फेसबुकटमा पोष्ट गरेको विचार)